Fitondrana vohoka sy ny fonja: Ny fahasalamana sy ny zon’ny vehivavy voafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2009 21:24 GMT
Vakio amin'ny teny Filipino, Français, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Swahili, македонски, Español, Deutsch, Ελληνικά, English
Azonao eritreretina ve izany vehivavy hiteraka izany ka voapetaka menôty arakitra amin'ny fandrianany ny tanany sy ny tongony? Miteny amintsika amin'ity fomba fanao any Etazonia hatramin'izao fotoana izao ity i Malika Saada Saar, mpanorina sy tale mpanatanteraka ny Tetikasa Rebecca miaro ny zon'olombelona, fa efa fahazarana any amin'ny toera-pamonjana sasantsasany any Etazonia ny mametaka menôty ny vehivavy bevohoka mandritra ny fisafoana sy ny fiterahana, na dia mety hitera-doza amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza aza izany. Manaraka etoana ny lahatsary fanadihadiana miaraka amin'ny lahatsoratra ho an'ny RH Reality Check, tambajotran-tserasera iray miresaka sy manadihady ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana:
Samy manana ny lalàny avy ny isam-pirenena momba ireny zaza teraka tany am-pamonjana ireny. Any Arzantina, ohatra, araka ny lazain'ny Ajintem, fampahalalam-baovao an-tserasera mampahafantatra ny momba ny fifindra-monina, dia nisy lalàna manokana ho an'ny vehivavy bevohoka voafonja nolaniana tamin'ny herintaona, izay mametraka fa mahazo mamita ny saziny any amin'ny fonenany saingy mahazo alalana vao mahazo mivoaka sady arahi-maso ny vehivavy manan-janaka latsaky ny dimy taona na manana zaza sembana. Mahasoa tsy ny reny ihany izany lalàna izany, satria tsy hahazo fikarakarana ara-pahasalamana azo antoka ho azy izy mandritra ny fotoana itondrany vohoka, fa ny zaza ihany koa, izay mety ho notezaina tao anatin'ny tontolo tsy misy fahafahana sady tsizarizary ny sakafo sy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana, na mety hotezaina lavitra an-dreniny, izay mety hiteraka olana maro isan-karazany ihany koa. Na izany aza dia hafatra ampitaina amin'ny Mpitsara io hanarahany ny hevitry ny lalàna sy hanomezany alalana ireo vehivavy tsy tafiditra amina heloka miharo herisetra, ary hanomezana toky ihany koa ny mponina sivily fa tsy lalana malalaka ivoahana ny fonja tsy akory ny fitondrana vohoka.
Any amin'ny nosy Canary indray, araka ny filazan'ny bolongana Prisiones y Penas, izay miresaka ny momba sy ny lohahevitra mahakasika ny toera-pamonjana, dia mahazo alalana hitazona ny zanany hatramin'ny faha-3 taonany hiray efitra aminy ao am-ponja ny vehivavy, saingy miaraka amin'ireo vehivavy hafa miara-voafonja aminy ihany koa, izay tsy ny tontolo tsara indrindra. Avy amin'izany dia efa nilazana ny vehivavy bevohoka na manana zaza latsaky ny 3 taona hiditra ny fonja fa tsy mahasoa ny zaza ny mitombo any ambadiky ny fefy vy, ka omena safidy izy ireo ny hamoaka ny zanany ho any amin'ny fianakaviana. Tahaka izany ihany koa no mitranga any Peru sy Rosia. Any Etazonia dia toera-pamonjana roa ihany no manome alalana tahaka izany, any New York sy any Nebraska, araka izay nolazain'ilay mpaka sary malaza Jane Evelyn Atwood ao amin'ny sary fanadihadiana misy fizarana 3 nataony ho an'ny Amnesty International, antsoiny hoe Too Much Time[na: Ela loatra], izay nitsidihany toera-pamonjana ampolony manerantany sy nandraketany sy nanangonany fanadihadiana ny fiainan'ny voafonja.
Nahoana moa ny rafi-piarenana [fandraharahana ny fonja] any Etazonia amin'ny ankapobeny no mtsy mamela ny vehivavy hitazona ny zanany hiaraka aminy? Nohazavain'i Atwood fa tsy navela natao izany noho ny mety hisiana fanaovana takalon’ aina. Ao amin'ny Prison Photography Blog no hanaovan'izy ireo izao filazana izao:
Ny ango-panadihadian'i Atwood ao amin'ny songadin'ny vohikalan'ny Amnesty International no ilazany izany miteraka mipetaka menôty izany araka izay efa navoakan'i Vanessa's Baby sy ny momba ny rafi-piarenana sy ny fiainana maha-reny, omban'ny sary mandritra ny hamakiany ny lahatsoratra miresaka ny zavatra hitany tany am-pitsidihana fonja isan-karazany sy nakany saripika.
Nahoana no mampiroanahana tahaka izany ny zon'ny vehivavy bevohoka voafonja? Ao amin'ny Russia Today, televiziona Rosiana iray, dia voatonona ity lohahevitra ity rehefa noresahina ny momba ny zaza teraka sy nobeazina tany amin'ny rafi-piarenana rosiana:
Ary misy ny vehivavy taratra ihany fa ny fitondrana vohoka no lalana tokana ahafahana miala amin'ny fanefana sazy, tahaka izay nitranga tamin'ny volana jona teo, raha nogadraina sy nohelohina ho faty ny vehivavy anglisy iray tany Laos noho ny raharaha zavamahadomelina fa bevohoka tany am-pigadrana izy, rehefa tsy mamono ho faty ny vehivavy bevohoka ny fitondrana any Laos. Ny filazana nataon'ny Daily Express, gazety anglisy iray, no nahafantarana fa natsaika tamin'ny fomba artifisialy ravehivavy mba hanavotana azy.
Geraldin Rodríguez, Arzantiniana voafonja any Ekoatera noho ny fanondranana zava-mahadomelina no niresaka tamin'i Marcos Brugiati, mpanoratra sady nampiroborobo tamin'ny famoahana an-tserasera ny resaka zavakanto Plastica-Argentina, ny tantaran'ny fanaovana teathra any am-pigadrana, izany bevohoka any am-ponja ary ny nananany zaza. Nahazo alalana ny hitazona ny zanany hiaraka aminy izy saingy naleony mihalehibe any ampahalalahana ny zanany:
Migadra any amin'ny fonja Espaniola i Juvinete, ary bevohoka rehefa nohidiana noho ny resaka fanondranana zava-mahadomelina. Nitantara ny fiainany tamina gazetim-paritra NorteCastilla izy. Telo taona taorian'ny niterahany ny zanany tany am-ponja dia tsy maintsy nosarahina taminy ny zaza, ary nalefa tany amin'ny fianakaviana vonon-kandray ny zaza. Mifankahita amin-janany vavy isaky ny 15 andro i Juvinete ary mahazo alalana hivoaka 2 herinandro hiara-miaina aminy isaky ny roa volana. Saingy mety tsy hihatsara ny toe-draharaha: Mety halefa any amin'ny firenena niaviany any Brezila manko i Juvinete, ary manahy ny mety ho fiantraikan'izany fiovana izany amin-janany. Ary dia nanome soso-kevitra ho an'ny vehivavy rehetra mihevitra ny hitondra vohoka any am-ponja izy:
Ao amin'ny Woman and Prison,[ny vehivavy sy ny fonja] vohikala natao hanairana ny mhatra amin'ny vehivavy any amin'ny toera-piarenana, no iresahan'i Kebby Warner ny nitondrany vohoka tany amin'ny fonja amerikana, nitantarany ny nanaovana azy nandritra ny nitondrany vohokan niterahany sy ny taorian'izany, rehefa nalaina taminy ny zanany. Toy izao ny notsongaina tamin'izay nosoratany teo ampiterahana: